Pôrtô Rikô: Notohanan’i Daddy Yankee I John McCain · Global Voices teny Malagasy
Pôrtô Rikô: Notohanan'i Daddy Yankee I John McCain
Voadika ny 06 Novambra 2017 7:36 GMT
(Marihina fa tamin'ny 5 Septambra 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nisarika ny fampitam-baovao i Pôrtô Rikô hatramin'ny nanohan'ilay mpihira Daddy Yankee an'i John McCain vao haingana. Na dia tsy fantatra loatra ao amin'ny nosy Pôrtô Rikô noho ny any Amerika Atsimo aza izy dia nanararaotra ny lazan'ilay mpihira ity kandidà ho filoham-pirenena ity, amin'ny fomba fijerin'ny fifidianana, nandritra ny fihetsiketsehana iray tao amin'ny lisea ao Arizona. Nanoratra ireo bilaogera sasany fa tsy mpihira rap malaza i Daddy Yankee ary tsy maodely tsara halain-tahaka izy. Noho izany, iza no arahan'i McCain? Ny fifidianana mazava ho azy, ary indrindra indrindra ho an'ireo Pôrtô Rikana sy ireo vondrom-piarahamonina miteny Espaniola any Etazonia.
Araka ny nolazain'ny bilaogera Edwin Vazquez avy ao amin'ny Cargas y Desgargas hoe:
Niditra an-tsehatra tamin'ny zavatra mahatsikaiky ilay mpihira Reggaeton Raymond Ayala, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe “Daddy Yankee” : nanohana an'i John McCain tao amin'ny lisea iray tao Arizona izy amin'ny fifidianana filoham-pirenena, kanefa mampalahelo fa tsy manan-jo hifidy akory amin'ity fifidianana ity izy.
Tsy azon'ilay bilaogera Elco Lao antoka loatra hoe tena mahalala an'i Daddy Yankee i McCain :
… na dia nanambara aza ilay kandidà ho filoham-pirenena fa iray amin'ireo namany akaiky indrindra i Daddy, dia tsy maintsy namaky taratasy iray izy mba hahatsiarovany ny mombamomba azy, talohan'ny niakaran'i Daddy Yankee an-tsehatra. Nahalala azy avy hatrany kosa ny ankizivavy tao amin'ny sekoly, rehefa nanonona ny iray tamin'ireo hirany “GASOLINA” i Mc Cain.
Nandritra ny hetsika, nohiraina ny hiram-pirenena amerikana “Star Spangled Banner”, saingy nanaiki-molotra fotsiny nadritra izany i Daddy Yankee, izay tsy nahalala ny tononkira. Taorian'ilay lanonana, nihira ny iray tamin'ireo hirany malaza indrindra ilay mpihira rap, “Gasolina” (midika hoe solika na vola). Miresaka momba ny tovovavy iray mandehandeha anaty fiara ity hira ity ary mamerimberina miteny hoe “dame más gasolina” (omeo solika bebe kokoa aho) izy ao anatin'ilay hira. Mifanohitra amin'ny politikan'ny angovon'i McCain ny tononkiran'ity hira ity, ny drafitra kasainy mba hanentanana ny famokarana ny angovo hafa, ary ny tetikasany ho an'ny valin-kasasarana mitentina 300.000.000 dolara ho an'izay mpamorona hanafaka an'i Etazonia amin'ny fiankinan-doha amin'ny solika vahiny.
Tsy nampihontsina ny nosy ity vaovao ity, satria tsy manan-jo hifidy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ireo Pôrtô Rikana, ka tsy dia niraharaha izany loatra ireo fampitam-baovao tao an-toerana. Nahita izany ho fihetsika ara-politika manan-danja ireo bilaogera any Etazonia satria nisafidy hifandray tamin'ireo Pôrtô Rikana sy ireo Latina hafa monina any Etazonia i McCain niaraka tamin'ny mpihira fanta-daza iray.